बच्चाहरु र आफ्नो प्रकारको सांगीतिक खिलौने
अझै पनि गर्भमा, बच्चालाई सुरु गर्दा सक्रियतासाथ ध्वनि उहाँलाई सम्म wafting र तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया गर्न बुझ्ने गर्न। उहाँले पहिले नै आफ्नो सांगीतिक प्राथमिकताहरू धेरै मूर्त pinochkov मार्फत देखाउन अन्य आवाज आमाबाबुले को आवाज भेद, र गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, सांगीतिक खिलौने जीवनको पहिलो महिनामा बच्चाको विकास गर्न यति महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूले मोटर कौशल mastering को प्रक्रिया मा एक लाभदायक प्रभाव पार्न र ताल को एक अर्थमा सिर्जना गर्नुहोस्। गरेको खिलौने यस प्रकारको मुख्य प्रजातिहरू कुरा गरौं।
Castanets र लग बेलुन पहिलो सांगीतिक खिलौने आफ्नो बच्चाहरु हुन सक्छ। तिनीहरूले या त अलग वा एक सेट मा बेचिन्छ, र सामान्यतया काठ को छन्। यस्तो शैक्षिक सांगीतिक खिलौने फिलर को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, ध्वनि भिन्न। निस्सन्देह, एकैचोटि बलमा धेरै पेशकश मांसल सानो केटा छैन आवश्यक छ, पहिलो, 2-3 प्रजाति मा सीमित हुन। बाटो गरेर, तहखाने मा घर मा तिनीहरूलाई बनाउन। लिन अखरोट वा चकलेट अन्डा को दाना को गोले र बाल लागि बाहिरी खोल, मुद्दा, रबर बैंड डिजाइन अनाज, बालुवा, मोती, Bells, आदि सुट कपडा स्क्रापहरू तिनीहरूलाई भर्न - .. यो सबै केवल आफ्नो कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
सुसज्जित बटन, जब क्लिक, एक किसिम संग रेडियो वा संगीत खेलाडी को रूप मा बच्चाहरु को लागि सांगीतिक खिलौने परिचित मेलोडीज नर्सरी राइम्स खेल्न सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ रमाइलो पदमा बच्चाहरु खाता र वर्णानुक्रम सिकाउन जो आवाज प्रभाव, संग मोडेल पनि छन्। जनावर र अनुकरण ध्वनि तिनीहरूलाई द्वारा जारी छविहरू उपकरणहरू पनि बच्चाहरु मा एक साँचो चासो कारण।
सांगीतिक hammers, एक हास्यास्पद ध्वनि प्रहार गर्दा माथि एक वर्ष गर्न बच्चाहरु प्रेम गर्नेछ emits। तिनीहरूलाई केही विशेष सर्कल संग सुसज्जित हुन सक्छ, जसमा वस्तु tilting द्वारा छवि परिवर्तन।
बच्चाहरु को लागि यस्तो शैक्षिक सांगीतिक खिलौने, को सर्टर रूपमा पनि व्यापक लोकप्रियता आनन्द। , को प्वालमा सही तथ्याङ्कले रही बच्चालाई एक हास्यास्पद ध्वनि प्रभाव वा आफ्नो मनपर्ने धुनहरू प्रोत्साहन लागि प्रतीक्षा को मामला मा। एउटै टोकन संचालित र सांगीतिक पिरामिड द्वारा। औपचारिक fanfare सुन्न TOT, उचित अनुक्रम र आंकडा माथि hoisted सबै छल्ले मा राख्दै र रंग रोशनी को अधिकता चमकता हेर्नुहुन्छ पछि। यो उहाँको लागि एउटा रोमाञ्चक अमरीकी गरेको कामको लागि सबै भन्दा राम्रो इनाम हुनेछ।
सायद बच्चा को लागि सबै भन्दा रोचक, तर एकदम महँगो खेलौना शैक्षिक केन्द्र र मैट छन्। त्यहाँ केवल भिन्न निर्माताहरु संग आउँछ! rustling, घन्टी, पनि एक वयस्क impressing सक्षम तत्व clattering को प्रशस्त, एक्लै बच्चा। त्यसैले, आफ्नो पछाडि झूट, बच्चा अप उसलाई सकारात्मक आफ्नो समग्र भौतिक अवस्था प्रभावित कि सांगीतिक खिलौने झुन्डिएको पुग्न सक्दैन। बटन को एक किसिम र "krutilki" संग हुर्केपछि बच्चा सुट विकास तालिका को रूप मा केन्द्र लागि। त्यहाँ ट्रांसफार्मर को मोडेल बच्चा बढ्दै जाँदा परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छन्।
यसरी, सांगीतिक खिलौने बच्चाहरु को सुरिलो र व्यापक विकास गर्न योगदान, त्यसैले तिनीहरू आवश्यक कुनै पनि बच्चाको कोठा मा उपस्थित हुन अनिवार्य छ।
बच्चाहरु को लागि बूस्टर - छोराछोरीको कार सिट एउटा अद्भुत वैकल्पिक
चिनियाँ रेशम - बहुमूल्य कपडा
कुर्सी पेग Perego को लाभ
के बाट मोजा को गोडा माथि लगाउन?
आफ्नै हातले एक गाडी कसरी सजाउनु गर्न?
एक महिनाको लागि प्रोटिन आहार: मेनु, व्यञ्जनहरु, समीक्षा र परिणाम। वजन लागि सबैभन्दा प्रभावकारी आहार
हार्दिक र स्वादिष्ट चिकन चाउचाउ घर
"मेगाफन", "सबै-समावेशी एम" - जडान वा विच्छेदन, समीक्षा
आन्तरिकमा कालो छत
रेस्टुरेन्ट मास्को मा "पाई को जीवन", ठेगाना, मेनु, समीक्षा
Protea फूल - अफ्रिकी गुलाब
मास्कोबाट रोड्स कसरी उडान गर्ने: यात्राको नग्नता